August dombo rekuzvarwa. Ruvara runotapira. Nyowani yekuvandudza 2021
Peridot uye Spinel ndiwo maviri mabwe ekuberekwa kara yemavara yaNyamavhuvhu, zvinoenderana neyese yekare neyemazuvano mazita eAugust matombo mavara anoreva. Matombo anokosha eAugust mabwe ekuberekwa kana chishongo chomuhuro.
Chii chinoreva dombo rekuzvarwa raAugust?
Nyamavhuvhu rekuzvarwa rinoreva: dombo rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waNyamavhuvhu: Peridot uye Spinel
Chii chaAugust dombo rekuzvarwa?
Iri kupi dombo rekuzvarwa raAugust rinowanikwa?
Chii chinonzi Nyamavhuvhu mabwe ekuberekwa?
Ndekupi kwekuwana August dombo rekuzvarwa?
august mabwe ekuberekwa chiratidzo uye Zvinoreva
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zveAugust matombo ekuberekwa?
Peridot iri gem-yemhando yemiorivhi uye silicate maminera. Ruvara rwayo rwegirini rwunotsamira pane zviri mukati zvesimbi mukati mechimiro chegombo. Peridot inoitika mumatombo asina silika-akadaro basalt yemakomo uye nemumatombo epallasitic. Peridot nderimwe rematombo maviri chete anocherechedzwa kuti aumbwe kwete mudenga rePasi, asi mudombo rakaumbwa rejasi repamusoro. Gem-mhando peridot hazviwanzo kuwanikwa pasi pevhu nekuda kwekukanganisa kwayo mamiriro ekunze panguva yekufambisa kubva mukati mukati mejasi kusvika kumusoro.
Spinel inojekesa mune isometric system. Kazhinji kristal mafomu ndeye octahedra, kazhinji akapetwa. Iyo ine isina kukwana octahedral cleavage uye conchoidal kutsemuka. Kuoma kwaro kunosvika masere, giravhiti yakatarwa iri 8-3.5, uye iri pachena kuti opaque ine vitreous kutonhodza kubwinya. Inogona kugadzira akakwana august dombo rekuzvarwa
Peridot, ine siginecha yacho girinhi august dombo rekuzvarwa, inofungidzirwa kuisa simba uye pesvedzero mune iye anoripfeka.
Spinel inogona kunge isina ruvara, asi inowanzo kuve dzakasiyana shades pink, rose, tsvuku, bhuruu, girini, yero, shava, nhema, kana zvisingawanzoitika Violet. Iko kune yakasarudzika yakasikwa chena Spinel, izvozvi zvarasika, izvo zvakabuda muchidimbu mune izvo zvava kunzi Sri Lanka.
Iwo manyuko makuru e peridot nhasi iU.SA, Australia, Brazil, China, Egypt, Kenya, Mexico, Myanmar, Norway, Pakistan, Saudi Arabia, South Africa, Sri Lanka, neTanzania.
Spinel yakagara ichiwanikwa muSri Lanka, Afghanistan, Tajikistan neMyanmar. Kwemakumi emakore apfuura gem mhando spinels anowanikwa muVietnam, Tanzania, Kenya, Tanzania, Madagascar uye munguva pfupi yapfuura muCanada
Zvishongo zvekuzvarwa zvakagadzirwa ne peridot uye Spinel. Isu tinotengesa Nyamavhuvhu mabwe ekuberekwa zvishongo, zvindori, mhete, mitsipa nezvimwe.
Pane zvakanaka peridot uye Spinel iri kutengeswa muchitoro chedu
Peridot yakave yakakosheswa kubvira pakutanga kwempucuko yesimba rayo rekudzivirira kudzinga kutya uye nehusiku. Zvinotendwa kutakura chipo chekupenya kwemukati, kurodza pfungwa nekuchizarurira kumatunhu matsva ekuziva nekukura, zvichibatsira munhu kuti azive nekuziva ramangwana rake uye chinangwa chemweya. VaIjipita vekare vaitenda izvozvo Peridot yakatumirwa kuPasi nekuputika kwenyeredzi uye yakatakura masimba ayo ekuporesa. Peridot ndiro dombo repasi rose reEgypt rinozivikanwa nevanhu veko seGemari yeZuva.
Spinel matombo anonzi anobatsira kuisa parutivi egos uye kuzvipira kune mumwe munhu. Sematombo matsvuku anopisa, Spinel inofungidzirwa kuti inokurudzira kukurudzira kukuru, kuzvipira uye kurarama kwenguva refu. Spinel inosanganiswa nemudzi Chakra, ichiita kuti ibudirire mukuwedzera simba remuviri uye simba.
Leo naVirgo mabwe ese ari maviri matombo aAugust ekuzvarwa.
Chero zvauri Leo naVirgo. Peridot uye Spinel ndiro dombo kubva muna Nyamavhuvhu 1 kusvika 31.
August 1 Leo Peridot uye Spinel
August 2 Leo Peridot uye Spinel
August 3 Leo Peridot uye Spinel
August 4 Leo Peridot uye Spinel
August 5 Leo Peridot uye Spinel
August 6 Leo Peridot uye Spinel
August 7 Leo Peridot uye Spinel
August 8 Leo Peridot uye Spinel
August 9 Leo Peridot uye Spinel
August 10 Leo Peridot uye Spinel
August 11 Leo Peridot uye Spinel
August 12 Leo Peridot uye Spinel
August 13 Leo Peridot uye Spinel
August 14 Leo Peridot uye Spinel
August 15 Leo Peridot uye Spinel
August 16 Leo Peridot uye Spinel
August 17 Leo Peridot uye Spinel
August 18 Leo Peridot uye Spinel
August 19 Leo Peridot uye Spinel
August 20 Leo Peridot uye Spinel
August 21 Leo Peridot uye Spinel
August 22 Leo Peridot uye Spinel
August 23 Virgo Peridot uye Spinel
August 24 Virgo Peridot uye Spinel
August 25 Virgo Peridot uye Spinel
August 26 Virgo Peridot uye Spinel
August 27 Virgo Peridot uye Spinel
August 28 Virgo Peridot uye Spinel
August 29 Virgo Peridot uye Spinel
August 30 Virgo Peridot uye Spinel
August 31 Virgo Peridot uye Spinel
Natural Nyamavhuvhu rekuzvarwa dombo riri kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinoita tsika yakagadzirwa Nyamavhuvhu yekuzvarwa mabwe semabatanidzwa ekubatanidza, maringi, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Peridot neLudwigite-vonsenite sindano 4.33 ct
Peridot neLudwigite-vonsenite sindano 3.29 ct
Peridot neLudwigite-vonsenite sindano 3.03 ct
Peridot peya 1.39 CT